Babilônia - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Babilonia)
I Babilônia dia fanjakana miteny akadiana tamin' ny Andro Taloha sady erana ara-kolontsaina nifototra amin' ny faritra afovoany-atsimo amin' i Mesôpôtamia (mifanandrify amin' i Iràka sy i Siria ankehitriny). Tamin' ny taoa 1894 tal. J.K. no nipoiran' ny fanjakana notapahin' ny Amôrita vitsivitsy, izay nahitana ny tanàna kelin' i Babilôna nisahanana ny fandraharahana ny fitondram-panjakana. Mbola tanàna kely amin' ny faritanin' ny Empira Akadiana (2335–2154 tal. J.K.) i Babilôna tamin' izany fotoana izany nefa efa nisy fandrosoana lehibe nandritra ny fanapahan' ny mpanjaka Hamoraby tamin' ny antsasany voalohany amin' ny taonjato faha-18 tal. J.K. sady lasa renivohitra lehibe. Nandritra ny fanapahan' i Hamoraby sy taorian' izany dia nantsoina hoe Māt Akkadī (teny akadiana midika hoe "ny tanin' i Akady") i Babilônia.
Ny fiitaran' ny tanin' ny Empira Babilôniana tamin' ny fiantombohana sy ny fiafaran' ny fanapahan' i Hamoraby, izay mahafaoka ny misy an' i Koety sy Iràka ankehitriny.
Matetika i Babilônia dia mifanandrina amin' ny fanjakan' i Asiria ao avaratra sy amin' i Elama ao atsiananana ao amin' ny misy an' i Iràna taloha. Nandritra ny fotoana fohy taorian' i Hamoraby (1792–1752 tal. J.K. na 1696–1654 tal. J.K.) dia lasa fanjakana matanjaka i Babilônia tany amin' izany faritra izany, izay namorona empira tsy nahari-pisiana, nandimby ny Empira Akadiana voalohany sy ny dinastia fahatelo tao Ora ary ny Empira Asiriana Taloha. Rava haingana ny Empira Babilôniana taorian' i Hamoraby ka lasa fanjakana madinika.
Sahala amin' i Asiria koa ny Fanjakana Babilôniana izay nitahiry ny fiteny akadiana soratana (fitenin' ny mponina niaviany) amin' ny soratra ara-panjakana ataony, na dia miteny semitika avaratra-andrefana aza ny Amôrita mpanorina azy ary na dia miteny amin' ny fiteny manirery aza ireo Kasita mpandimby azy ireo, izay tsy manam-piaviana mesôpôtamiana. Voatahiriny ny fiteny someriana izay ampiasainy amin' ny fivavahana (toa an' i Asiria), nefa tamin' ny fanorenana an' i Babilôna dia efa tsy fiteny nifampiresahana am-bava izany satria nailiky ny fiteny akadiana. Nisahana anjara asa lehibe teo amin' ny kolontsaina babilôniana sy asiriana ny fomba amam-panao akadiana sy someriana, ary nitoetra ho ivo ara-kolontsaina matanjaka izany faritra izany, na dia tamin' ny vanimpotoana maharitra nisian' ny fanjakazakana nahazo azy avy ety ivelany.
Ny firesahana voalohany ny tananan' i Babilôna dia mety ilay hita ao amin' ny tanimanga fanoratana tamin' ny andron' i Sargôna any Akady (2334–2279 tak. J.K.), izay nosoratana tamin' ny taonjato faha-23 tal. J.K. I Babilôna tamin' izany fotoana izany dia ivon-toerana ara-pivavahana sy ara-kolontsaina fotsiny fa tsy fanjakana mahaleotana na tanàna lehibe; sahala amin' ny faritra sisa rehetra amin' i Mesôpôtamia dia notapahin' ny Empira Akadiana i Babilôna izay nanangona ireo vahoaka miteny akadiana sy someriana ka nametraka azy eo ambany fitsipika tokana. Taorian' ny firodanan' ny Empira Akadiana, ny faritra atsimon' i Mesôpôtamia dia nanjakan' ny Gotiana nandritra ny taompolo vitsivitsy talohan' ny niakaran' ny dinastia fahatelon' i Ora, izay, ankoatry ny faritra avaratra amin' i Asiria, mahafaoka an' i Mesôpôtamia, isan' izany i Babilôna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Babilônia&oldid=1012323"
Dernière modification le 12 Jiona 2021, à 16:26
Voaova farany tamin'ny 12 Jiona 2021 amin'ny 16:26 ity pejy ity.